Safaaradda Mareykanka ee Iswiidhan oo uga digtay muwaadiniinta ineey tagaan Göteborg | Somaliska
Safaaradda Mareeykanka ee dalkaan Iswiidhan ayaa uga digtay muwaadiniinta ku sugan dalka in ay tagaan magaaladda Göteborg maalinta berito ah oo ay ka dhacayaan banaanbax balaaran oo ay dhigayaan kooxaha mdaxa faquuqa qaba ee cunsuriyiinta.
Qoraal lugu daabacay bogga internet-ka ee ay safaaraddu leedahay ayaa lugu sheegay in “Banaabaxyo hore oo ay dhigeen kooxahani ay sababay rabshado”. Safaaradda ayaa muwaadiniinteeda uga digeeysa ineeysan ka ag dhawahaan halka banaanbaxyada ka dhacayaan, haddii ay si aan ku talagal aynina u tagaan ay la yimadaan taxadar.
Kooxahan cunsuriyiinta ah ee la baxay NMR, ayaa lugu wadaa maalinta berito ah oo sabti ah in ay banaan bax ka dhigaan bartamaha magaaladda Göteborg, kuwaas oo sheegay in xubnahooda oo kun qof gaaraya ka qeyb qaadan doonaan. Kooxdan naasiyiinta ah ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ay walaac ku abuureen dad badan iyo jaha wareer xagga siyaasadda ah. Muddo haatan laga joogo toddobaad ayey kooxdani waxeey ka dhigeen magaaladda Göteborg banaanbax eeysan ogolaanso u aheeysan, waxaana uu falkaasi dhaliyey guux aad u balaaran.